Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Hanome fizaram-bahiny ve ny drafitra fanaovan'i Ryanair Bullish fahavaratra 2022?
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Irlandey • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny zotram-piaramanidina lafo vidy indrindra any Eropa dia maminavina ny fahavaratra 2022 amin'ny fotoana hamiratra azy, ary eo am-panomanana ny diany.
Ryanair dia nametraka ny filohany amin'ny fangatahana miverina amin'ny alàlan'ny fanombohana familiana mpamily ho an'ny mpanamory fiaramanidina 2,000 mandritra ny telo taona.
Ryanair dia handefa 50 an'ny kaomandy 200+ fiaramanidina vaovao amin'ny fahavaratra 2022.
Miaraka amin'ny fangatahana mihombo amin'ny fitomboan'ny dia, Ryanair dia mety ho iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana milahatra tsara indrindra mandray ny fangatahana.
Ryanair dia nibanjina ny fahavaratra matanjaka tamin'ny 2022. Miaraka amin'ny fijanonan'ny fiaramanidina vaovao sy ny fandraisana mpiasa vaovao, amin'ny herintaona dia toa handoa onitra ho an'ny zotram-piaramanidina izy ireo, na eo aza ny mpandeha sasany miaina teti-bola lany.
Ny zotram-piaramanidina lafo vidy indrindra any Eropa dia maminavina ny fahavaratra 2022 amin'ny fotoana hamiratra azy, ary eo am-panomanana ny diany. Ryanair dia nametraka ny filàny amin'ny fangatahana miverina amin'ny alàlan'ny fanombohana fiara mpamono olona mandroso 2,000 mandritra ny telo taona. Ankoatr'izay, i Ryanair dia handefa 50 an'ny kaomandin'ny 200+ vaovao amin'ny fahavaratra 2022, satria miomana amin'ny vanim-potoana faran'ny COVID be mpampiasa indrindra izy hatramin'izao. Miakatra be ny fangatahana maharitra noho ny fitomboan'ny fivezivezena satria manomboka mihamahazo vahana erak'i Eropa ny famerana, dia mety ho iray amin'ireo kaompaniam-pitaterana tsara toerana indrindra handray ny fangatahana i Ryanair, ary mety hamoa ho an'ny mpitatitra, indrindra amin'ireo fiaramanidina vaovaony.
ny vaovao Boeing Ny fiaramanidina 737-8200 dia hanolotra seza fanampiny valo raha ampitahaina amin'ny fiaramanidina misy azy 189 ankehitriny, ary hampihena ny fandrehitra solika amin'ny 16% isaky ny seza ary hampihena ny fandefasana tabataba / CO2, izay tokony hanampy amin'ny fandaniana ambany kokoa.
Ny fiaramanidina vaovaon'i Ryanair izay manova lalao dia toa vonona hitondra ny toeny efa ambany indrindra ary ambany kokoa aza. Ny fihenan'ny fandrehitra solika isaky ny seza dia hampihena ny fandaniana amin'ny solika, noho izany hanomezana vola be ny sidina. Raha ampitaina amin'ny mpandeha, Ryanair dia eo amin'ny toerana matanjaka hampihenana ny vidin'ny tapakila, ho lasa mpifaninana bebe kokoa, ary hanitsaka ny rantsan-tongotry ny mpilalao hafa. Ny fiaramanidina vaovao an'i Ryanair, miaraka amin'ny fangatahana avo lenta, dia mety hahita ilay mpitatitra ho ambony ao anatin'ny tontolo aorian'ny COVID, hisarika ireo mpandeha mahatsiaro teti-bola maro izay mety nanambara ny tsy fivadihan'izy ireo tany an-toeran-kafa talohan'ny areti-mandringana.
Ny valim-panadihadiana farany natao dia nanaporofo ny fiatraikan'ny areti-mandringana amin'ny tetibolan'ireo mpandeha miaraka amin'ny 11% amin'ireo olona namaly fa milaza ny fihenan'ny tetibolan'ny dia taorian'ny COVID.
Mihena ny vola, ireo mpitsangatsangana izay nisafidy ireo mpitatitra serivisy dia toa hifindra ho any amin'ny mpitatitra lafo vidy mandritra ny fotoana fohy. Ryanair dia hanana toerana tsara raha ampitahaina amin'ny hafa, indrindra fa ny fampidirana ny fiaramanidina vaovaony sy ny tahirim-bola azony ampitaina handrisihana ny fangatahana.
Ankoatr'izay, ny fanadihadiana iray hafa dia nanambara ny vidiny ho singa lehibe indrindra amin'ny fisafidianana marika marika fiaramanidina. Maherin'ny antsasaky ny (52%) ny valinteny no nifidy ny vidiny / sanda ho zava-dehibe indrindra - izay manambina tsara an'i Ryanair.
Ny toerana misy ny fifaninanana eo amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, ny sarany ambany ary ny tambajotra eropeana mivelatra dia handoa onitra ary afaka mahita ilay zotram-piaramanidina ho toy ny mpitondra safidy amin'ny dia taorian'ny COVID. Miaraka amin'ny fandoavana ny zavatra ilainao maodely, dia ho manintona an'ireo mitady ny serivisy fototra indrindra i Ryanair. Mety hanetsiketsika ny mpilalao am-perinasa ity, ary ny fomba fiasa avoakany dia haharesy ireo mpandeha hanampy azy hivoaka amin'ny areti-mandringana.